मसानलाई लिएर मातृमन्दिरमा निधन | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
Home गृहपृष्ठ मसानलाई लिएर मातृमन्दिरमा निधन
मसानलाई लिएर मातृमन्दिरमा निधन
बतासले जस्तै कहिलेकाहीं मान्छेको प्रवृत्ति यस्तो यायावरीय भइदिन्छ कि भुमरीजस्तै घुमफिर गर्न थाल्दछ एकै ठाउँमा तर आफैंमा गतिमान हुन्छ ।
अस्ति यस्तै संयोग परिरह्यो । २०७९ जेठको अन्तिम शनिवार (२८ गते) सात बज्न केही मिनेट बाँकी छँदै हेटौंडास्थित सोलिड्यारिटी इन्टरनेशनल स्कूलको सभाहलअगाडि उभिइसकेका थियौं । कार्यक्रम बिहान ७ बजेदेखि राखिएकोले रौतहटबाट म र साहित्यकार मित्र किशुनदयाल श्रीकृष्ण रौतहटको गरुडाबाट बिहान करीब सवा पाँच बजे निस्केका थियौं । श्रीकृष्णसित कैयौं यात्रा गरेको छु र कैयौंपटक हेटौंडा पनि पुगेको छु तर यसपटक एउटा यस्तो संयोग मान्नुपर्छ कि घरअगाडि मोटरसाइकलमा बसेर एकैपटक हेटौंडाको कार्यक्रमस्थलसम्म एकपटक पनि नरोकी पुगेका
नवसर्जक साहित्य चौतारी नेपालको प्रथम राष्ट्रिय बालसाहित्य उत्सव थियो । सातै प्रदेशबाट सहभागीहरू गराइएका थिए । सातै प्रदेशमा चौतारीका प्रदेश समितिहरू गठन गरिएका छन् । सबै प्रदेश संयोजक तथा संरक्षकहरू बोलाइएका थिए । म पनि मधेस प्रदेश संरक्षक हुँ । प्रदेश संयोजक रुबी गुप्ता र अर्का बालप्रतिभा अभिजित राम एक दिनअगाडि आइपुगेका थिए ।
संस्थाका परिकल्पनाकार वा मुख्य आयोजक दीपक गौतम आइपुगेका थिनन् । कार्यक्रम आयोजना हुने हलभित्र पसेर हेर्दा आगन्तुकमा पहिलो हुन गएको पायौं । आयोजकले केही मानिसलाई हलको व्यवस्थापन गर्न लगाएका थिए । एउटा विद्यालयको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो एउटा भव्य हल हो । यस हलमा मेरो पहिलो प्रवेश हो । एकैछिनमा दीपक गौतम आइपुग्छन् र दुवै हात जोडेर अभिवादन आदानप्रदान गर्दै म भन्छु– स्वागत छ कार्यक्रममा । एक बान्की हाँसो फिFजिन्छ वातावरणमा ।
मलाई लाग्छ, हेटौंडा मेरो माइती हो । म त्यहाँ जन्मेको भने होइन । मेरा मातापिताको पनि साइनो हेटौंडासित छैन । आफ्नो युवावयको ऊर्जावान् १२ वर्ष हेटौंडामा बिताएको छु । यस अवधिलाई एउटा युग नै मान्न सकिन्छ । एक युगमा अन्य क्षेत्रका साथी निकै कम छन् तर साहित्यको सेवामा लागेका धेरै साथी कमाएको छु । पत्रकारिता क्षेत्रका कतिपय मानिसलाई चिनेको छु । शिक्षा क्षेत्रका केही विशिष्ट मानिसले पनि चिन्न पाएका छन् । यसको कारण यही हो कि हेटौंडामा म जति वर्ष बसें, सक्रिय भएर बसें । शिक्षा, साहित्य र पत्रकारितामा निरन्तर सक्रिय रहें । यसै कारण कहिलेकाहीं भन्छु– हेटौंडाको शिक्षा, साहित्य र पत्रकारिताको विकासमा मेरो पनि योगदान छ ।
हेटौंडा छोडेको एक युग नाघिसकेको छ तर हेटौंडाको माया भने उत्तिकै लागिरहन्छ । म हेटFैंडासित निरन्तर जोडिएको छु । यही भएर पनि होला, हेटौंडा पुगिरहन्छु । हेटौंडाका साहित्यिक कार्यक्रमहरू र विशेषगरी विशिष्ट साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा पुगिरहेको हुन्छु । हेटौंडाबाट पत्रकार गिरिजा अधिकारीको अनलाइन तुखबरडटकममा मैले एउटा स्तम्भ नै शुरू गरेको छु– मकवानपुरको महक । यस स्तम्भमा मकवानपुरको साहित्यिक सुगन्धको चर्चा गर्ने गरेको छु ।
र अहिले पनि साहित्यिक कार्यक्रममैं आएको छु । बालसाहित्यको क्षेत्रमा यस किसिमको यो पहिलो प्रयास हो । मनमा उत्साह छ र एउटा कस्तो हो कुन्नि अलग्गै किसिमको अपेक्षा पनि । यो अपेक्षा मेरो आफैंसित छ । कार्यक्रम जति सफल हुन सक्यो, उत्ति खुशी हुन पाउने अपेक्षा । लागिरहेको छ म आयोजक हुँ । आयोजक नभएर पनि आयोजक हुँ । यस कारण उत्साहित पनि छु । उत्साहले मनलाई फुरुङ्ग तुल्याएको छ । रुईजस्तो हलुङ्गो भएको छ मन किनभने समयमैं आइपुगेको छु, सकुशल ।
कार्यक्रमको लागि व्यवस्थापन भइरहेको छ । मेरा पुराना दाजु सुमन झापालीलाई फोन गर्छु –
दाजु नमस्कार, कहाँ हुनुहुन्छ ?
भाइ नमस्कार, भन कहाँ आऊँ ?
अहिले सोलिड्यारिटी स्कूलमा छु ।
ल, अहिले म पाँच मिनेटमा आइपुगें ।
नभन्दै बाहिर निस्कन नपाउँदै आइपुग्छन् सुमन दाइ । हामी निकै मिल्छौं । जिएस निकेतन खुलेपछि हेटौंडामा सँगै पढाउन शुरू गरेदेखि हाम्रो सङ्गत छ । हामी बाहिर निस्कन्छौं चिया खान । त्यहाँ बस्दा नबस्दै धेरैजना साहित्यकार आउँछन् र पच्चीस वर्षभन्दा धेरै वर्षपछि भेट हुन्छन्, रामकुमार श्रेष्ठ । श्रेष्ठ प्याब्सन हेटौंडाका अध्यक्ष हुन् भन्ने समाचार फेसबूकबाट थाहा पाएको थिएँ । उनी गाडीमा हुन्छन् र सीसाबाट हेर्दा चिनेको छु । हातको इशाराले बोलाउँछु । गाडी छेउ गरेर आइपुग्छन् । यो मिलन अपूर्व हुन पुग्छ । साँच्चै, माइतीका आफन्त धेरै वर्षपछि भेट हुँदा मनमा कस्तो हुन्छ ? यही अनुभूति अनुहारभरि छचल्किएका छन् । थोरै व्यक्त र धेरै अव्यक्त संवादिन्छौं हामी । मैले हेटौंडामा शिक्षण शुरू गर्दाका हामी साथी जो हौं ।
गफ्ंिदै, जिस्किंदै, मस्किंदै, मुस्कुराउँदै, हाँस्दै बिस्तारै कार्यक्रमतिर लाग्छौं । कार्यक्रम शुरू हुन्छ । कार्यक्रमको आफ्नै भव्यता छ । रम्यता छ । विशिष्टता छ । कहिले कोसित त कहिले कोसित तानिएर बाहिर निस्किरहन्छु । बिहानदेखि पाँच कप चिया भइसकेको छ । अब छैटौं कपको लागि कविहरू एसके निधन तथा मसान उपासकसित निस्कनुपरेको छ । निधनलाई मन पर्ने चियापसल भुटनदेवी मन्दिरछेउमा छ । निधनको गाडीमा छजना हुइँकिन्छौं, उतैतिर । हँसाउने पाराले वा बढी मानिस भएपछि हो, अद्र्धगम्भीर पारामा निधन भन्छन्– आउनुस् ट्याक्टरमा ।
जति मीठो कविता लेख्छन् एसके निधन उत्तिकै स्वादिलो गाडी चलाउँछन् । गफ त अझ मीठो । गाडी चलाउँदै मन्दिर पुग्न थालेपछि अलिक जिस्किने किसिमले निधन भन्छन्– मसानलाई लिएर हामी मन्दिर जाँदैछौं ।
मसान उपासक कवि तथा पत्रकार हुन् भने निधन कवि तथा शिक्षक । अन्य हामी चारजना पनि साहित्यसित जोडिएका छौं । चिया खान गाडीमा पुग न पुग एक किलोमिटर जति टाढा पुग्दैछौं । मन्दिरको गेटमा रहेको चियापसलको चिया निधनलाई मन पर्छ । यसैले निधनले नै मसानलाई लिएर मन्दिरको गेटतिर निस्केका हुन् ।
मन्दिर हेटौंडामा प्रसिद्ध भुटनदेवी मन्दिर हो । मन्दिरको मुख्यद्वार हेटौंडा स्कूल अफ म्यानेजमेन्टले बनाएको छ । यस मन्दिरको सम्बन्ध महाभारतसित रहेको मानिन्छ । महाभारत पर्वतको फेदीमा समथर हेटौंडाको प्रसिद्ध शक्तिपीठ हो, भुटनदेवी मन्दिर । गाडीबाट ओर्लिएपछि सोझै चियापसलमा पुग्छौं र ठाउँ रोजेर बस्छौं । कागती चियाको लागि कागती छैन । यस कारण दूध चिया नै खानुपर्ने हुन्छ । चियाको प्रतीक्षामा छौं ।
अनेक गफ चलिरहेको छ । आआफ्नै धुन छ । कहिलेकाहीं सामूहिक हाँसोले गुन्जिन्छ घर ।
मेरो मनमा भने हेटौंडा र भुटनदेवी मन्दिरको सम्बन्धबारे कुरो आउन थाल्छ । हेटौंडा शहरको नाम नै यही मन्दिरबाट रहन गएको हो । कालान्तरमा भुटनदेवी र हेटौंडा नाम बिल्कुलै फरक जस्तो लागे पनि वा कुनै मेल भएको जस्तो नलागे पनि हेटौंडाको नामकरण यही मन्दिरको नामबाट भएको हो भन्ने मनमा आइरहेको छ ।
महाभारत युद्ध हुनुभन्दा पहिले चुरे र महाभारतबीचको यो क्षेत्रमा विशाल जङ्गल थियो । भयङ्कर डरलाग्दो यस वनलाई हिडिम्ब राक्षस र हिडिम्बा राक्षसनीले गर्दा अझ डरलाग्दो भएको थियो । कालान्तरमा भीमसेनसित हिडिम्बाको बिहे हुन पुग्छ र घटोत्कच जन्मिन्छ । महाभारतका भीमसेनकी पत्नी हिडिम्बा र घटोत्कचकी आमा हिडिम्बाको ठाउँको रूपमा चिनिन थाल्छ । यही हिडिम्बा शब्दको अपभ्रंश हुँदै उच्चारण सजिलोतिर बग्ने क्रममा हिडिम्बाबाट हेटौंडा हुन गएको हो भन्ने लोकमान्यता रहेको छ ।
जुन हिडिम्बाको नामबाट हेटौंडा शहरको नाम रहन गएको हो, सोही हिडिम्बाको मन्दिरको नाम भने भुटनदेवी रहन गएको भन्ने मान्यता छ । महाभारतमा पाण्डवको विजय भएपछि स्वाभाविकरूपले हिडिम्बाको मान बढ्छ । महाभारतमा आफ्नो खसमको कुशलताको लागि दिन र रात नभनी प्रार्थना गरिरहने हिडिम्बा महाकालीकी भक्त थिइन् । महाकालीको भक्त भएको र पाण्डवको खानदानसित जोडिन पुगेको कारणले मात्र नभई घटोत्कचजस्तो पुत्रलाई जन्माएको कारणले महाकाली भक्त हिडिम्बालाई देवीकै सरह मान्यता प्राप्त भएको थियो । महाकालीसित हिडिम्बाको पूजा हुन थालेको थियो । हिडिम्बा नाममा राक्षसको गन्ध रहेकोले हिडिम्बाको नाम भुटनदेवी रहन गएको हो । जसरी बिहारको राजधानी पटनाको नामकरणको सन्दर्भ पटनदेवीसित छ, त्यसरी नै वाग्मतीको राजधानी हेटौंडाको सम्बन्ध भुटनदेवीसित छ । भुटनदेवी र पटनदेवी दुवैलाई शक्तिको रूपमा स्थानीयले गर्ने श्रद्धाले शहरको मान बढाएको छ ।
सबैले चिया सिध्याइसकेका छन् । मैले भने बडो मुश्किलले आधा कप खाएको छु । ध्यान छ मन्दिर र शहरको नामकरणतर्फ त चियाको चुस्की लिइयोस् कसरी ? कार्यक्रमको पहिलो सत्र सकिएको सूचना कार्यक्रमस्थलबाट साहित्यकार श्रीकृष्णले दिइसकेका छन् । मोटल एभोकाडोमा भेट्ने सहमति गर्दै निस्कन्छौं, चियापसलबाट । मनमा अनन्त श्रद्धा छ ।
Previous articleकसैले चाहँदैमा रूढिवाद र अन्धविश्वास समाप्त हुँदैन
Next articleद्रोण पर्व–८१